Duufaan halis badan oo ku soo Fool-leh dhul xeebeedka Puntland & Somaliland | Kalshaale
Duufaan halis badan oo ku soo Fool-leh dhul xeebeedka Puntland & Somaliland
May 17, 2018 - 1 Aragtiyood
Boosaaso (Kalshaale) Duufaan xoog leh oo loo bixiyay ONE ayaa ka soo kacaysa waqooyiga badwaynta Hindiya waxaana la filaya in ay saamayn doonto inta badan gobollada Somaliland iyo Puntland 24 ilaa 48 saac ee foodda inagu soo haysa, sida ay sheegtay hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Cunnada iyo Beeraha ee FAO.
Duufaantan ayaa lagu wadaa in ay marka hore ku dhufan doonto Puntland 24ka saac ee soo socda ka dibna ay ku faafidoonto dhanka Somaliland iyo deegaannada kale ee dhexe, Hay’addu waxay intaas ku dartay in duufaantaas ay wehelin doonaan robaab mahiigaanno ah.
War haddaanba beri joogaa bisinkee. Kolay jawigu waa badalan yahay. Roobab baa da aya dabayl tii xagaaga aad moodo ayana waa socotaa. Bosaso kulaylkii lagu yaqaanay maba laha maanta iyo xitaa shalay.